रोजीरोटी नखोस गरिखानेलाई अवसर देउ - Himalay Online Media
रोजीरोटी नखोस गरिखानेलाई अवसर देउ
नेपाली भुमिमा आर्थिक अभाबले पिल्छिएको श्रमिकबर्ग आफ्नो घर परिवारको सपना पूरा गर्न दिनरात खटिरहन्छ तर पनि सधै , आर्थिक अभावको कारण पीडादायी जीवन जिउन बाध्य हुन्छ । हरेक बस्तिमा धेरै प्रकारका मानिसहरुको बसाइ संग संगै निम्न बर्गका मानिसले यस्तो जीवन भोगिरहनु परेको हुन्छ । उस्लाइ जीवन जिउन देखि समाजमा घुलमिल हुन समस्या परेको हुन्छ । आर्थिक कमजोरीको कारण हरेक अबसरबाट बन्चित हुन् पुगेको हुन्छ । उनीहरुको मान सम्मान ईजतको कुनै अर्थ हुदैन । धनाढ्यहरुले यस्तै कमजोरीहरुको सदुपयोग गर्दै निच हर्कत गरेको धेरै उदाहरणहरु हाम्रो समाजमा जताततै देख्न र भेट्न सकिन्छ । यतिमात्रै नभएर धनि वर्ग कहलिएकाहरुले गरिब बर्गका मानिसहरुलाई शोषण गर्ने गरेका छन् ।
मानिस हरेक अबसरबाट पछाडी परेपछि उस्ले बिकल्पहरु खोज्न शुरु गर्छ । कुनै पनि बिकल्प नदेखेपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा बैदेशिक रोजगारीलाई रोज्न पुग्छ । बैदेशिक रोजगारको मिठो सपना संग रमाउदै हरियो राहदानीलाई बन्दकी राखी बिमानस्थल सम्म आइपुग्छ बिस्तारै परदेशी भुमिमा पाहिला टेक्छ । जति देखिएको सपनामा रमाउदा मज्जा आउछ त्यति नै पिडापरदेशी भूमिमा बिपनामा भोग्नु पर्दा कस्तो होला ? एउटा भनाई नै छ नि अभागी खप्पर जहा गएपनि ठक्कर यस्तै पिडा भोग्न विवस हुन्छन बिदेशिएका नेपालीहरु तेस्मा पनि अझ घरेलु कामदारहरुको पिडा त झनै पीडायुक्त हुनेगरेको बिदेशी भूमिमा पुगेका नेपालीहरुको दुखेसो रहने गरेको छ । एकातिर घरपरिवारको बिछिडको पिडा त छदैछ अर्को तिर नत सुत्नको कुनै टुङ्गो हुन्छ नत खान बस्न कै ! रातदिन घरमुली र उसको बालबच्चाको स्याहारसुसार गर्दैम दिनचार्य बित्ने गर्छ । बिस्तारै समय बित्दै जान्छ घर परिवारको सपना पूरा गर्दै समाजमा टिक्न सक्ने बाताबरण मिलाउदैमा आफ्नो शरिरले पनि आराम खोज्ने समय हुन्छ ।
केहि समयको लागि आराम गर्ने घरपरिवार संग भेटघाट गर्ने विदेशको नियम अनुसार घरबिदामा फर्किने समय हुन्छ तब नेपाल सरकार र बैदेशिक रोजगार विभागको कुराले घरेलु कामदारको मनमा दुखको भुमरी शुरु हुन्छ । घरेलु कामदारको भिषामा सुधार ल्याउने भन्दै सरकारले लगाएको बाध्यात्मक नियमको कारण बल्ल तल्ल साहुलाइ रिजाइ जन्मभुमि फर्कने ठूलो रहर हुदा हुदै पनि घर फर्किन बाट बन्चित हुनु पर्दा धेरै घरेलुकामदार स्वदेश फर्किन सकेको छैनन् । नाफर्किउ घरपरिवारको माया फर्किउ रोजीरोटी नै खोसिने डर ! त्यतिबेला घरेलु कामदारले सोच्ने गर्छन गरिब जनताको लागि बनेको होइन रैछ त्यो श्रम मन्त्रालय अनि श्रम बिभाग । कम्पनीको मालिकको लागि रहेछ , टेबलमा बसेर कलम चलाउने हाकिमको लागि रहेछ श्रममन्त्रालय र बैदेशिक बिभाग । किन घरेलु कामदार को लागि कुनै पहल हुदैन श्रमस्विकृत गर्न ? आखिर गरिबको लागि कुनै तेस्तो कुनै ढोकाछैन जहाँ सजिलै छिर्न सक्ने । कतिजेल घरपरिवारको पिडाले प्रबासमा बस्ने घरेलुकामदारहरु ? उनिहरुको परिवार सङ्ग बस्ने सपना के सपनमै सिमित हुने हो ? कस्ले सुन्छ यी बेथाहरु जहाँ कुनै बिकल्प देखिदैन !
स्वदेशमा दिनरात दुख गर्दा बिहान बेलुकाको चुले बाल्न कठिनाइले आज पर्देश छिरेको नेपालीहरु दिनरात पर्देशमा सन्तानको मायाले आँसु झार्न बाध्य छन् । परदेशमा एकातिर कामको प्रेसर छ भने अर्को तिर परिवारको याद, सोचे जस्तो सजिलो हुदैन पक्कै परदेश एसीको चिसो हावाले र फृजको पानीले बाच्नु पर्छ । सुत्न र उठनको लागि घडिको साहयता लिनु पर्छ जहाँ घडीको आवाज संगै आखा मिच्दै काममा खटिनु पर्छ । सोझा जनताले नेतालाइ जिताउन आफ्नो मताधिकार बेचे, नया परिबर्तनको आशामा जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लगाए तर कुनै नया परिबर्तन देखिएन । उही पुरानो परिपाटी आफ्नै पोल्टो भर्ने तिर लागे । नत जनताको लागि कुनै नया योअजना र बिकास नै ल्याईदिए । गरिबीको रेखामुनी रहेर परदेशीएका नेपालीहरुको आशा केही थिएन स्वदेशमा नभए बिदेशमा भएपनि गरिखाने बाटो खुलाइदिए आफैले रोजीरोटीको जोहो गर्न सक्थे । दुखले परदेश हिडेपनि सुखले स्वदेश फर्किन सक्ने बाताबरण बनोस । विदेशबाट फर्किएका घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतिमा सहजीकरण गरिदियोस, स्वदेश फर्किने बाताबरण मिलाईयोस । गरिखानको लागि त ईश्वरले हात दिएकाछन बस गरिखाने बाताबरण बनोस ।
गरिबीको रेखामुनी रहेर परदेशीएका नेपालीहरुको आशा केही थिएन स्वदेशमा नभए बिदेशमा भएपनि एउटा सपना पूरा गर्दा अर्को सपना परिवारको लागि बुनु पर्ने हुन्छ । कहिले सम्म आफ्नो रगत पसिना अर्काको देशमा बगाउने? कहिले सम्म बिदेशीको गुलमी गर्ने ? कहिले लामो सास फेरेर आनन्दको निद्रा पाउने? ? कहिले सम्म परिवारको साथ देखि टाढा हुने ? अब त केहि गर गरिबीको रेखामुनी रहेका लाखौ नेपालीहरुलाई गरि खाने बाटो देखाइदेउ । परदेशमा होइन स्वदेश मै रोजगारीको बन्दोबस्त होस खाडीमा चुहिने पशिना नेपाली भुमिमा सिंचित गर्न पाईयोस नेपाल र नेपाली भनेर स्वाभिमानी बनेर बाच्न सकियोस । रोजीरोटी खोसेर हैन समस्या समाधान हुदैन समस्या समाधानको लागि अबसरको सृजना गरौ ।
लेखक : तृष्णा खड्का (दाहाल) हाल बैदेशिक रोजगार युएई
एमाले र माअोवादीबीच चुनावी तालमेल तथा पार्टी एकीकरण सहमति नजिक ।
सुस्केराद्धारा अभिनित “कोरोनाले परदेशमा” नामक म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्ब अध्यक्ष शिव गाउले युएई आइपुगेका छन।